Nezvedu - Yakakwana Ratidza Technology Co, Ltd.
AKAKWANA RATIDZA TECHNOLOGY CO., LTD
Yakakwana Ratidza Tekinoroji Co, Ltd. yakavambwa muna 2006 uye kubvira ipapo isu takagadzira kuita inotungamira inogadzira yeLCD uye akataridza zvigadzirwa zvekuratidzira, kusanganisira maGame monititiza, maCCTV monita, Veruzhinji vanoona monitors, All-In-One PC, Dhijitari Signage uye Inopindirana Whiteboards. Iine 15,000 m2 fekitori, 2 otomatiki uye 1 emanyowani ekugadzira mitsara isu tine yekugona inokwana mamirioni miriyoni diki pagore. Nekuda kwekuenderera kuri kuwedzera isu tichakurumidza kuenda kufekitori nyowani, yakakura kwazvo, tichiwedzera masimba edu kuzvikamu zvinopfuura mamirioni maviri pagore
Isu tinoshandisa yakawandisa mari yedu yemubhadharo paKutsvagisa nekusimudzira uye isu tine chivimbo chekuti tinopa mamwe emamwe akanakisa monitors uye kuratidza zvigadzirwa zviripo pasirese. Isu tinogara tichiedza kuyedza uye kunatsa chigadzirwa chedu, nezvigadzirwa zvitsva zvinopihwa nguva dzose. Yedu ruzivo R & D nyanzvi dziri kugara dzichishanda pakugadzira zvigadzirwa izvo iwe mutengi zvaunoda uye zvaunoda. Isu tinopawo zvizere maOEM uye maODM services, saka kana iwe uchida chimwe chigadzirwa isu tine chivimbo chekuti tinogona kuzvigadzira nekuzvigadzirira iwe.
Isu tinozvirumbidza nekusava yakachipa pamusika sezvo isu tichifunga isu tinofanirwa kuvaka kana zvigadzirwa kusvika kune yepamusoro, kwete pasi pamutengo! Tine izvozvo mupfungwa tinongoshandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemhando yepamusoro, kubva pamapaneru kusvika pasi kune zvinodzivirira.
Kambani yedu yakawana yazvino ISO zviyero, kusanganisira ISO9001: 2015 uye ISO14001: 2015, kuti ugone kushanda nesu uine chivimbo. Pamusoro pezvo, zvese zvigadzirwa zvedu zvine CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE uye Energy Star certification, uye UL chitupa inowanikwa pamubhadharo.
Yedu bhizinesi uzivi hwakavakirwa pamatanho mana akakosha - Kuvimbika, Kugadzira, Hunhu uye Sevhisi
Ishuviro yedu kuve anotungamira kugadzira zvigadzirwa zvekuratidzira munyika, uye isu tinotenda isu tiri munzira yekuzadzisa ichi chinangwa.